Raharaham-pitsarana :: Noferana faran'izay kely ny asan’ny tribonaly amin'ireo faritra dimy • AoRaha
Karazana fiandrasan-draharaha maika sisa no hiantsorohan’ny tribonaly eo anivon’ireo Fitsarana any amin’ireo faritra ianjadian’ny valanaretina Covid-19, taorian’ny fampiharana ny fepetra fihibohana mandritra ny dimy ambin’ny folo andro. Namoaka naoty mametra ny asa aman-draharaha hosahanin’ireo Fitsarana isan’ambaratongany eto Analamanga, any Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Atsinanana ary Analanjirofo ny minisiteran’ ny Fitsarana, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo.
Tsy hisy intsony ny fandraisana ny raharaha ady madio vaovao. Ireo raharaha tena maika sisa no raisin’ny Fitsarana miampy ny fangatahana famindram-pahefana amin’ny karama sy ny fisotroan-dronono. Ireo raharaha tena maika koa no azon’ny Fitsarana misahana ny ady heloka tsotra raisina. Azon’ny Fitsarana atao kosa ny fandraisana ny fangatahana fahafahana vonjimaika, araka ny voalaza ao amin’ilay naoty.
Tsy mitsahatra fa mitohy ny asan’ny fampanoavana sy ny Fitsarana mpanao famotorana ary rantsam-pitsarana misahana ny famonjana amin’ireo tribonaly ao anatin’ireo faritra dimy ireo. Ahemotra amin’ny fotoana manaraka avokoa ireo raharaham-pitsarana hafa, toy ny ao amin’ny fitsarana misahana ny kolikoly. Miato koa ny asan’ny fitsarana tampony, ny kaonty, ny Filankevi-panjakana, ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana…
Noraràna indray ny famangiana an’ireo voafonja ary tsy maintsy aterina mialoha ny amin’ny 11 ora maraina ny sakafon’izy ireo. Hatoka-monina mandritra ny dimy ambin’ny folo andro avokoa sady hatao fizahampahasalamana ireo voafonja vaovao mialoha ny hifangaroany amin’ireo hafa.
Manangasanga ny fifidianana sefo fokontany
Olana tamin’ny andrana « 5G » Tafakatra eny amin’ny Fitsarana ny fifanolanan’ny Telma sy Artec
Ady amin’ny covid-19 :: Mihiboka tanteraka Analamanga
Raharaha depiote sy zanadary :: Nandamòka ny fikononkononana tetsy Tsimbazaza